Rakotomanga Eric : “ny fahantram-bahoaka no tena olana fototra eto” | NewsMada
Rakotomanga Eric : “ny fahantram-bahoaka no tena olana fototra eto”
Inona ny olana fototra amin’izao krizy politika izao? Maneho ny fijeriny ny filoha nasionalin’ny AKFM, Rakotomanga Eric: “Fahantran’ny vahoaka noho ny fitantanana tsy mety, indrindra ny zotram-politika ara-toekarena andehanan’ny firenena… Izay no fototry ny olana amin’izao.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ny fahitanao ny toe-draharaham-pirenena amin’izao?
Rakotomanga Eric (-): Mihazakazaka… Mihazakazaka miaraka amin’izay koa ny fifandanjan-kery ao anatiny. Ny vahoaka, efa tena tofoka etsy andaniny; ny ankilany, mifikitra mafy eo amin’ny fitondrana, manjary mampiditra olon-kafa any anatiny. Anisan’izany, ohatra, ny fiangonana, ny fiombonambe iraisam-pirenena.
– Raha ny marina, tokony hotazonina mafy ny foto-kevitra itambaran’ny rehetra hoe: raharaha sy olan’ny Malagasy izao, ny samy Malagasy ihany no mamaha azy. Tsy tokony hiditra ny fiombonambe iraisam-pirenena.
Manaraka izany, momba ny fidiran’ny fiangonana amin’ny hoe fanelanelanana sy fampihavanana: heveriko fa hiverina any amin’ny taloha indray io. Tsy inona izany fa fampihavanam-pirenena: tsy voavaha ny olana, nefa mody mihavankavana amim-pihatsarambelatsihy eo.
* Ahoana ny amin’ny fihazakazahan’ny vahiny hanao fanelanelanana?
– Tena mihazakazaka ry zareo. Izay no manaporofo fa tena mbola mahazo tombontsoa izy ireo amin’izao fitondrana izao. Azo atao ohatra ny any Armenia, mitovy tsy misy hafa amin’izao. Nefa tsy hita hoe miditra any ny avy amin’ny Firenena mikambana (ONU), na ny Vondrona eoropeanina… Eto Madagasikara izany, hita fa voakitikitika ny tombontsoan-dry zareo. Koa tsy maintsy miditra hiaro an’izay izy.
* Manao ahoana ny amin’ny fampihavanana ataon’ny FFKM sy ny CFM?
– Itovian’ny FFKM sy ny Malagasy hafa amin’ny fiombonambe iraisam-pirenena ny fampihavanam-pirenena. Hampihavankavana eo izany, nefa tsy voavaha ny olana. Ny vahoaka, mijaly ihany. Vokany, lasa ny mpanao politika maloto sy ny toy izany no tonga eo amin’ny fitondrana. Ny eo no miverina, tsy maintsy hitohy ihany ny krizy.
* Fa inona ny tena fototry ny olana amin’izao fotoana izao?
– Fahantran’ny vahoaka noho ny fitantanana tsy mety, indrindra ny zotram-politika ara-toekarena andehanan’ny firenena. Izay no fototry ny olana amin’izao, mahatonga ny fomba fitenenana tsy ankatoavin’ny AKFM loatra hoe fanovana ifotony. Izany hoe: fototra voalohany ny fanovana ny rafitry ny politika ara-toekarena. Nefa haharitra ela izay.
Na izany aza, tokony hojerena koa ny fomba fitantanana, fa tsy fitantanana liberaly gaboraraka toy izao. Misy ny antomotra ezaka tsy maintsy atao: fanarenana haingana aloha ny fiainam-bahoaka.
* Amin’izany rehetra izany, aiza ho aiza ny fiatrehana ny fifidianana?
– Raha ny marina, andrasan’ny vahoaka io fifidianana io. Eritreretina hoe amin’io fifidianana io no hanombohana izay fanovana ifotony izay. Nefa voasakan’ny lalàna mifehy ny fifidianana ataon’ny fitondrana izay amin’izao fotoana izao. Eo no miteraka ny krizy, satria mba efa nihevitra ihany ny vahoaka hoe amin’ny alalan’ny fomba milamina no hanoloana ny fitondrana. Saingy tsy manaiky an’izay ny fitondrana. Eo no mifandona ny hevitra, dia nipoaka ny krizy.
* Ny amin’ny mety ho fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny amin’ny lalàm-pifidianana?
– Azo inoana, tsy fantatra raha izay no izy na tsia: tsy hanaraka intsony ny lalàna koa na ny HCC aza, satria hiafina ao ambadiky ny fampihavanam-pirenena ataon’ny fiangonana sy ny fiombonambe iraisam-pirenena. Saro-toerana ny HCC amin’izao… Satria raha ny lalàmpanorenana sy ny lalàna no arahina, marim-pototra ny fitoriana napetraky ny solombavambahoaka: tokony holaviny ny fandaniana farany ny lalàm-pifidianana teo. Tsy ho sahy ny amin’izay anefa izy. Efa nisy rahateo koa ny fandrahonana azy ireo. Hiafina ao ambadiky ny fampihavanam-pirenena izy, ka tsy hamoaka didy.
* Ny fijerinao ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny parlemanta amin’izao fotoana izao?
– Raha ny tokony ho izy, mivoaka alohan’ny fivorian’ny Antenimierampirenena io… Tsy hanao an’izany ny HCC, satria ho sahirana izy ny amin’izay zavatra izay. Mametraka baraingo ngezabe io fivoriana io: hisy sa tsia? Raha hisy izany, solombavambahoaka vitsivitsy no hivory. Tsy fantatra ny fomba fanapahan-kevitra amin’izany.
Voalaza fa maro ireo solombavambahoaka no toa nangorona entana, tsy hita eny ho eny intsony. Ireo solombavambahoaka mpanohitra koa, inoana fa na hiditra ao aza izy: zavatra hafa no hojerena momba ny lalàm-pifidianana amin’izany.